Aaska Robert Mugabe Khilaafkii ku gedaamnaa oo laga heshiiyay - BBC News Somali
Aaska Robert Mugabe Khilaafkii ku gedaamnaa oo laga heshiiyay
Image caption Marwadii koobaad ee Robert Mugabe
Madaxaweynihii hore ee Zimbabwe Robert Mugabe ayaa waxaa lagu aasi doonaa qabuuraha lagu aaso halyeeyada Zimbabwe oo ku taalla magaalada Haraare, sida ay BBC-da u sheegeen qoyskiisa.
Afhayeenka qoyska Leo Mugabe ayaa sheegaya in weli la isku raacin maalinta saxda ah ee la aasayo.
Balse ka hor aaskiisa ayaa waxaa la sameyn doonaa xaflad qaran waxaanaa taasi xiga doonta munaasab kale oo lagu qabanayo tuulada Mr Mugabe.
Qoyska Mugabe iyo dowladda ayaa markii hore waxaa ka dhexeeyay khilaaf ku aaddan goobta lagu aasayo Madaxweynihii hore.
Mugabe oo 95 jir ahaa wuxu todobaadkii hore ku geeriyooday isbitaal ku yaala dalka Singapore.
Meydkiisa ayaa yaala garoonka kubadda cagta ee Rufaro oo ku yaala caasimada Zimbabwe ee Harare.
Kumanaan qof oo baroor diiq iyo tacsi dhigaya ayaa isugu yimid garoonka Rufaro si ay xushmad ugu muujiyaan Mr Mugabe.
Garoonka Rufaro ayaa ah halka Mugabe loogu dhaariyay madaxweynahii ugu horeeyay ee Zimbabwe sannadkii 1980-kii kadib markii uu ku guulaystay doorashadii ugu horaysay xorriyadii Zimbabwe ka dib.
Madaxweyne Emmerson Mnangagwa ayaa amaanay Mr Mugabe oo ku tilmaamay halyeey qaran, taas oo muujineyso in lagu aasayo xabaalaha geesiyaashii Zimbabwe loona sameeyo baroor diiq qaran.
Wasiirka waxbarashada ee Paul Mavhima wuxuu sheegay inaysan shaki ku jirin in Mr Mugabe loo aasayo sida halyey qaran.
Mr Mugabe ayaa shaqada ka eryay Mr Mnangagwa sanadkii 2017-kii.
Mnangagwa iyo Mugabe ayuu khilaaf soo kala dhexgalay markii "uu uga shakiyay inuu xukunka kala wareegi rabo".
Robert Mugabe Wuxuu ahaa madaxweynihii ugu horreeyay ee Zimbabawe oo xilka hayay in ka badan 30 sano. Wuxuu xilka qabtay ka dib markii Zimbabawe ay ka xurowday gumeystihii Britain.
Sannadkii 2017-kii, Wuxu eryay saaxibkiisii mudada dheer oo ahaa madaxweyne ku xigeenkiisa Emmerson Mnangagwa isaga oo dhabbaha u xaadhayay xaaskiisa Grace si ay xilka ugala wareegto, Bishii November ee isla sanadkaasi, Ciidanka dalka ayaa farogeliyey siyaasadda oo ku khasbay inuu is casilo.
Kumuu ahaa Robert Mugabe?
2009: Iyadoo dhaqaaluhu dumay ayuu Tsvangirai u dhaariyey ra'isal wasaarenimo oo xukuumad midnimo qaran ah oo aan is ogolan ay ku wada jireen afar sano
Dalalka Maraykanka, Ingiriiska iyo Midowga Yurubayaa iyaguna sida MDC oo kale aan aqoonsanin wixii ka soo baxay doorashada maadaama oo doorshada ay hadheeyeen qalaase iyo eedo musuqmaasuq ahi, waxaanay Mugabe iyo Zimbabwe ba sii galeen go'doon sii kordhaya.
Sannadii 2005 ayaa Mugabe wuxu bilaabay olole loo bixiyey Soo Celinta Kala Dambaynta oo gacan adag lagu saaray suuqa madow iyo waxa lagu sheegay "qas guud" oo dalka ka jiray.